Maxkamadda ciidamada oo xukun ku riday askar dil ka geysatay Muqdisho – Hornafrik Media Network
Hey’adda dambi baarista Boliiska CID ayaa ku soo wareejiyay labada eedeysane Xafiiska Xeer Ilaalinta, waxa uuna xafiiska weydiistay Maxkamadda 15-ka bishii Sagaalaad ee sanadkan in loo dhaa-dhiciyo xabsiga dhexe.
Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa soo eedeeyay labada eedeysane baaritaan dheer kadib 16-ka bishii tegtay, waxay Maxkamadda weydiisteen in la muddeeyo dacwad qaadista Xasan Xuseen Maxamed iyo Xasan Muuse Warsame oo loo heysto dilka marxuum Istar Axmed Cabdulle iyo dhaawaca dhibane Faadumo Axmed Cabdulle oo ahaa walaalo marayay agagaarka Isbitaalka Masaarida ee degmada Hodan.
Dable Boliis Xasan Xuseen Maxamed oo ka jawaabayay eedda loo heysto ee ah dilka iyo dhaawaca ay u geysteen gabdho walaalo ah oo Bajaaj wada saarnaa ayaa Maxkamadda u sheegay in ay si wada jir ah xabadaha u rideen isaga iyo eedeysanaha labaad ee Maxkamadda la hor taagnaa.
Ugu danbeytii Maxkamadda ayaa dable boolis Xasan Xuseen Maxamed ku Xukuntay diltoogasho ah, halka dable Xasan Muuse Warsame ay ku xukuntay shan sano oo xabsi ciidan ah iyo Magta ruuxa dhintay.
Dad hor leh oo ku dhintay rabshadaha dalka Ciraaq.